Ihe niile ikwesiri ịma banyere oge nke afọ | Netwọk Mgbasa Ozi
Dị ka ị maara, otu afọ zuru oke n'ụwa nwere oge 4: ọdịda, udu mmiri, mmiri na ọkọchị. Dị adị nke oge a kara aka bụ n'ihi mmeghari nke uwa na orbit ọ nwere na gburugburu Sun. Dabere na ohere na ịdị elu nke anyị nọ na mbara ụwa, mgbanwe nke ihu igwe na ihu igwe nwere ike ịbụ opekempe ma ọ bụ karịa. Nke ahụ bụ, enwere ike oge dị ezigbo mkpa ma dị iche ma ọ bụ ndị ọzọ yiri nke ahụ.
N'ebe a, anyị ga-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oge oge nke afọ n'ụzọ zuru ezu ka e dozie obi abụọ.
1 Oge nke afọ na mkpa ha
2 Ihe na-akpata na mmetụta
3 Solstices na equinoxes
4 Mmekọrịta nke ụwa orbit na ọdụ
Oge nke afọ na mkpa ha
N'etiti etiti latitude nke mbara ala, ihu igwe na-agbanwe ọtụtụ afọ. Stationslọ ebe a na-enwe ugwu ugwu nwere njiri mara ma ọ bụ karịa na mpaghara niile nke mpaghara oke ugwu a. Mgbanwe nke okpomọkụ, mmiri ozuzo, ifufe, wdg. Ha na-emetụta odida obodo, ebe ọ na-agwakọta ya na ihe omuma nke ndị dị ndụ bi n’ime ha.
A na-emetụtakwa odida obodo n’obodo mepere emepe ebe ọ bụ na ọrụ mmadụ na-agbanwekwa n’oge nke afọ. Ọ bụghị otu ihe ịhụ mpaghara ndị dị n'ụsọ osimiri n'etiti oge ọkọchị karịa n'oge oyi. Ma ihe omume na ịchọ mma na ọnụnọ ma ọ bụ enweghị nke ìgwè mmadụ nọ n'ụsọ osimiri na-agbanwe ọdịdị ala.
N'ozuzu, Anyị na-ekwu maka oge 4 nke afọ na oge 3 ma ọ bụ obere karịa. E nwere mpaghara dị na mbara ụwa anyị nke nwere naanị oge abụọ n’afọ: otu nke mmiri na nke ọzọ akọrọ. Dịka ọmụmaatụ, nke a na - eme na mpaghara udu mmiri. Monsoons bu oke mmiri ozuzo na ebe udu oku. Ha na-eme n’oge ụfọdụ n’afọ ma na-akpata oke idei mmiri.
Ihe na-akpata na mmetụta
Anyị ga-amata ihe kpatara oge nke afọ na mmetụta ọ na-eweta na ndụ n’elu ụwa. Nnukwu osisi anyị nwere maka ụgbọ elu nke orbit nke na-agagharị na Sun maka ihe dị ka ogo 23. Nke a pụtara na ụfọdụ mpaghara ụwa na-enweta ụzarị anyanwụ dị iche iche n'oge dị iche iche n'afọ.
Esemokwu ndị dị na ihu igwe nke akụkụ dị iche iche nke mbara ala nwere ọdịiche dị iche na mpaghara oyi na ọnọdụ oyi ma dịkarịsịrị na ogbe. Iji maa atụ, ka anyị na-erute nso nso, otu obere ihe enwere ihu igwe n'afọ niile. Nke a bụ n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha na-enwetakwu otu ìhè anyanwụ, ọ bụ ezie na anyị nọ n'ọnọdụ dịgasị iche iche gbasara anyanwụ na gburugburu.
A na-ahụkarị oge dị iche iche site na oge udu mmiri site na ọkọchị. Oge ndị a dị ihe dị ka ọnwa 3 ma dabere na ọchịchọ nke ụwa. Otu nwere ike iche na ọ na-ekpo ọkụ n'oge ọkọchị n'ihi na ụwa anyị dị nso na Sun. Agbanyeghị, nke a abụghị ikpe. Na agbara, na ụzọ si Earthwa ruo Anyanwụ okpon akan ini ndaeyo. Ihe a niile ka anyị na-ekwu maka mpaghara ugwu. Otú ọ dị, dị ka n'oge oyi enwere ọchịchọ ka ukwuu nke ụzarị anyanwụ, ọnọdụ okpomọkụ dị ala.
Oge nke afọ bụ 4: mmiri, ọkọchị, ụbịa na udu mmiri. Na nke mbụ na abụọ anyị nwere njirimara nke otu ụbọchị karịa abalị, ebe nke ọzọ abụọ ọ bụ nke megidere. Ebe ọ bụ na mgbanwe dị iche iche nke ihu igwe anyị kpọtụrụ aha bụ n'ihi ntụgharị uche nke ụwa, ọ dịghị eme n'akụkụ ugwu dị ka nke ndịda. Uzo abuo a nwere nsogbu. Mgbe ọ bụ ọkọchị n’ebe ugwu ụwa, ọ na-abụ oge oyi n’oge ndịda. Anyị nwekwara ike ịhụ otu mgbe mmiri bidoro n'otu akụkụ ụwa, ụbịa na-amalite na nke ọzọ.
Solstices na equinoxes
Ka moveswa na-aga site na nkuku mgbago ugwu ka ha na-agbada na Sun, South Pole na-eme nke ọzọ. Nke a pụtara na mpaghara ugwu na-enweta ụzarị ọkụ karịa ndị nke ndịda.. A gbanwere usoro a ma mpaghara ugwu ugwu na-enweta obere okpomọkụ ka ụbọchị na-adị mkpụmkpụ ma ụzarị anyanwụ na-ada.
A na-ekpebi ọdụ ụgbọ mbara igwe site na isi ọnọdụ anọ nke ụwa na-agba anyanwụ gburugburu. Akpọrọ ọnọdụ ndị a aphelion na perihelion bụ ndị na-enye oyi solstices y okpomọkụ na equinoxes nke vernal wee daa.
Mgbe equinox na-ewere ọnọdụ, ụzarị anyanwụ na-akụkarị n'akụkụ elu ụwa, yabụ na ha na-ada n'ụzọ kwụ ọtọ na ikuku. N'aka nke ọzọ, mgbe solstii ahụ na-ewere ọnọdụ, nke ọzọ na-eme. Nke ahụ bụ, ụzarị anyanwụ na-akụ elu ụwa site n’echiche nke ogo 23,5. Nke a na-eme ka oyi nke Cancer n'oge okpomọkụ na nke okpomọkụ nke Capricorn oyi.
Ọ bụghị oge niile nke afọ na-adịru otu. Nke a bụ n'ihi na orbit nke ụwa na-agagharị na Sun abụghị okirikiri, kama ọ bụ elliptical. Nke a na - akpata ya ime ọgbaghara. Wa na-aga ọsọ ọsọ ma ọ dị nso na Sun ma jiri nwayọ ma ọ gafee.
Mmekọrịta nke ụwa orbit na ọdụ
Oge ọ bụla n’afọ n’afọ abụghị otu maka ala ụwa nke ọ bụla. Iswa kachasi anyanwụ nso na mbido Jenụwarị, mana na mgbago ugwu anyị nọ n'oge oyi. Kaosinadị, na mbido ọnwa Julaị anyị nọ n’ebe dị anya site n’anyanwụ, mana n’oge ugwu ọ bụ ọkọchị. Oge ọkọchị amalitere anaghị ekpo ọkụ karịa nke ndịda ma oge oyi dị nro.
Oge nke afọ anaghị amalite mgbe niile n'otu ụbọchị na n'otu oge n'ihi ọgba aghara nke ụwa na-enweta ka ọ na-agagharị na Sun. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata mgbe ọ bụla oge ọ bụla malitere, anyị ga-agwa anyị onwe anyị nke kalenda telivishọn ma ọ bụ na mbara igwe.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu gbasara oge nke afọ, ihe kpatara eji mebe ha na kedu njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge
Mmeghari nke ọnwa